Mmekọrịta Delta na TSA na-egosipụta nnabata, nchekwa na etiti Atlanta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Mmekọrịta Delta na TSA na-egosipụta nnabata, nchekwa na etiti Atlanta
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Nhọrọ nke na-ebute ụlọ ọrụ maka ndị ahịa TSA PreCheck nke Delta na-ejikwa teknụzụ nnabata ihu iji mee ka ahụmịhe ọdụ ụgbọ elu si n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ.
Nkà na ụzụ ọhụrụ na -enye ndị ahịa ụzọ ka mma ha ga -esi gaa n'ọdụ ụgbọ elu - na -egosighị akwụkwọ ikike ịbanye akwụkwọ ma ọ bụ NJ gọọmentị nkịtị.
Njirimara dijitalụ nke ndị ahịa mejupụtara nọmba paspọtụ ha na TSA PreCheck ma ọ bụ Nọmba Njem Maara Ama nke Global ma teknụzụ teknụzụ ihu na -enyocha ya.
A ga -ebu ụzọ hụ akụrụngwa ihu ihu na Atlanta's South Security Checkpoint n'izu ndị na -abịa.
Ndị njem ụgbọ elu nwere ndị otu TSA PreCheck na nọmba Delta SkyMiles, nwere ike nwee ike nweta njem ụgbọ elu ngwa ngwa na nso nso a. Ọdụ ụgbọ elu Hartsfield-Jackson Atlanta International.
Ekpughere nke mbụ na ebe nchekwa nchekwa Detroit na mbido 2021, Delta Air Lines'Ahụmịhe njirimara dijitalụ bụ ụlọ ọrụ mbụ na mmekorita pụrụ iche na TSA PreCheck. Ahụmahụ na -agbasawanye Atlanta, na -enye ndị ahịa ụzọ ka mma isi banye n'ọdụ ụgbọ elu - na -egosighị akwụkwọ ikike ịbanye akwụkwọ ma ọ bụ NJ gọọmentị nkịtị. Naanị ilele igwefoto, ndị ahịa tozuru oke wee banye nwere ike lelee akpa n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma, gafere TSA Usoro nchedo PreCheck wee banye n'ụgbọ elu ha.
Ihe njirimara dijitalụ nke onye ahịa mejupụtara nọmba paspọtụ ya yana TSA PreCheck ma ọ bụ Nọmba Njem Ama Ama Njem Eluigwe na Ala wee gosipụta ya site na teknụzụ ihu, nke na -egosi njirimara onye njem na ebe mmetụ ọdụ ụgbọ elu. A ga -ebu ụzọ hụ akụrụngwa ihu AtlantaEbe nlele nchekwa nchekwa South n'ime izu ndị na -abịanụ, ọ ga -agbasawanye iji họrọ mbubata akpa na ebe ịbanye tupu ngwụcha afọ. Delta Air Lines na -ezube ịgbasa na oghere ndị ọzọ n'afọ na -abịa iji hụ na ahụmịhe njem enweghị mmetụ na -enweghị mmetụ n'ofe netwọkụ anyị.
Byron Merritt kwuru, "Mgbasawanye pụrụ iche nke njirimara dijitalụ na -akpali Delta otu ụzọ iji nweta ọhụụ anyị nke imepụta njem njem ahaziri nke ọma na njikọ zuru oke." Delta Air Lines'Onye osote onye isi nka nka nka. “Ebumnuche anyị n'ịgbanwe oge dị mkpa dị ka nchekwa na ịbanye na ahụmịhe enweghị nkebi bụ inye oge ma lekwasị anya na oge ndị ahịa na-enwe ọ. A na -emejupụta ihe ọhụrụ dị ka njirimara dijitalụ na ebumnuche iji gbanwee ahụmịhe njem na -ejikọ ọnụ na njem nke ndị ahịa anyị nwere ike na -atụ anya. ”
Na abụọ Atlanta na Detroit, njirimara dijitalụ ụlọ na -ewulite na nhọrọ ihu ihu Delta dị ugbu a maka njem mba ofesi, nke Delta bidoro ịnwale ihe karịrị afọ ise gara aga wee mechie na mmalite nke ọdụ ụgbọ mmiri mbụ na Atlanta na 2018.
Ndị njem nlegharị anya Russia tọrọ atọ na South Africa ka ọhụrụ...
Boeing kwụsịrị ikpe obodo MAX mana FlyersRights…
Mkpọpụta nke Zidone ekwu, sị:
October 20, 2021 na 16: 24
Naanị ị ga-eleba anya n'akụkọ ihe mere eme wee gosipụta mba ndị ọzọ…”dị mma” na “enyemaka maka ndị ahịa” bụ ka China si ere mmata ihu ya na “obodo ndị mara mma” yana usoro akara akara kredit iji mee ka ụmụ amaala ya bụrụ ohu.